Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxyo Lagaga Soo Horjeedo TPLF oo Dhulka Canfarta Kadhacay.
Banaanbaxyo Lagaga Soo Horjeedo TPLF oo Dhulka Canfarta Kadhacay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Canfarta ee kujira gacanta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu halkaas kadhacay banaanbax wayn oo lagaga soo horjeedo maamulka dhiig miiratada ah ee Wayaanaha.
Sida warku sheegayo kumanaan kamid ah ardayda iyo dhalinta Gobolka Canfarta ayaa isugu soobaxay wadooyinka waawayn ee dhulka canfarta oo dhan halkaas oo ay ku dhawaaqayeen erayo kadhan ah xukuumada Gumaysiga Itoobiya.
Ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa aad uga dhexmuuqday banaanbaxan oo markii dambe ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida aqoonyahanka, dumarka iyo dhalinyarada Gobolka Canfarta. Maamulka maqaarsaarka ah ee loosameeyay bahdilka dadka Canfarta ah ayaa isku dayay in ay joojiyaan kacdoonka hase yeeshee waxay tahli waayeen mowjadihii dadka ahaa ee burqanayay.
Gobolka Canfarta ayaa kamid ahaa labada meelood ee maamulkooda maqaar saarka ah uu taageersanaa kooxda TPLF waxaana Gobolka Canfarta arinkaas kuweheliyay maamulka dhidid dhowrka ah ee Kooxda TPLF tu ay gaysatay Ogadenia.
Dhinaca kale shacabka Canfarta ee shalay kacdoonka bilaabay ayaa noqonaya shacabkii ugu dambeeyay ee si wada jir ah uga horyimaada maamulka wayaanaha iyagoo raadinaya xoriyad ay kunoolaadaan shacabkoodu.
Sikastaba ha ahaatee maamulka dhiigya cabka ah ee wayaanaha ayaa noqday mid meeshuu fadhiistaba lagaga kaco isla markaana umuuqda mid quus taagan hada.